Oslo: Booliska Oslo oo xalay galay maqaaxi soomaali ah: 22 qof ayay dacweeyeen. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Oslo: Booliska Oslo oo xalay galay maqaaxi soomaali ah: 22 qof ayay...
Oslo: Booliska Oslo oo xalay galay maqaaxi soomaali ah: 22 qof ayay dacweeyeen.
Booliska magaalada Oslo ayaa xalay gudaha u galay mid kamid ah maqaaxiyaha soomaalida ee ciyaaraha lagu daawado, oo kutaal xaafada Grønland. Waxeyna gudaha goobtaas ugu tageen 22 qof, kuwaas oo dhamaantood laga gudbiyay dacwad ah inay jabiyeen sharciga kahortaga Coronavirus.
Booliska ayaa warbaahinta u sheegay in gudaha goobtaas lagu daawanayay ciyaar kubadda cagta ah. Iyaga oo raaciyay in dadka gudaha kujiray ay intaas ka badnaayeen, balse ay qaarkood banaanka taagnaayeen, marka ay boolisku meesha tageen.
Dad daris ah oo maqlayay qeylada meesha ka socoto ayaa booliska ku wargaliyay arrintan, sida ay boolisku ku sheegeen bartooda twitterka.
Degmada Oslo ayaa mamnuucday inay hal goob ku kulmi karaan ama isugu imaan karaan wax ka badan 10 qof, si looga hortago faafitaanka xanuunka Coronavirus.
Meel kale: 23 qof oo kale
Booliska Oslo ayaa dhanka kale sheegay in meel kale oo kutaal isla meesha ay ku qabteen 22-ka qof ay ku arkeen goob kale oo ku kulansanuyihiin 23 qof. Waxeyna dhamaantood ku dacweeyeen jabinta sharciga Corona.
Isku dar dadka ay boolisku ku dacweeyeen jabinta Corona ayaa noqonayo 45 qof.
Booliska ayaa qofkii ka qeybgala kulan ama xaflad ay kasoo qaybgaleen wax ka badan 10 qof ku ganaaxa 5000 kr, halka qabanqaabiyaha xaflada lagu ganaaxo 10.000 kr.
Xigasho/kilde: Politiet i Oslo anmelder 45 for brudd på smittevernregler på Grønland.
Previous articleKristiansand: Askari ku xadgudbay wiil soomaali oo kiis dacwo lagu soo oogay
Next articleSøreide: Waxaan la hadlay madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi.
Haugalandet: Qufac ayuu 10.000 kr oo ganaax ah ku muteystay.
Joe Biden oo hakiyay xayiraadii uu Trump saaray Soomaaliya +6 dal oo kale
Maxamed: Magaca ugu caansan ee loo bixiyay wiilasha Oslo ku dhashay 2020
Keydka NorSom Velg måned januar 2021 (43) desember 2020 (50) november 2020 (67) oktober 2020 (75) september 2020 (54) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)
Kategorier Velg kategori Annonse Covid-19 Doorashada 2017 Norway Fikrado Forsiden Meninger Meninger/Fikrado News in other languages NorSom Magazin Nyheter/Warcusub Økonimi/Dhaqaale Politikk/siyaasad sport Utdanning/Waxbarasho Vedio/Muuqaalo Wararka caalamka